Wiil uu dhalay wadaadkii caanka ahaa ee reer Koonfur Afrika Axmed Deedat oo madaxa laga… – Hagaag.com
Posted on 16 Janaayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Cilmi-baare iyo u dhaqdhaqaaqe Muslimiinta Youssef Deedat, oo ah wiilkii wadaadkii caanka ahaa ee diinta Islaamka, Sheikh Ahmed Deedat, ayaa la dhigay isbitaal isagoo ku sugan xaalad halis ah, kadib markii nin aan la garanaynin uu ka toogtay madaxa gadaashiisa magaalada Durban, South Africa, shalay subaxnimadii maalintii Arbacada.
Sida laga soo xigtay Prem Balram, oo ah afhayeenka waaxda gargaarka koowaad ee Koonfur Afrika, Yusuf (66 sano jir ah) wuxuu ku sii jeeday maxkamadda qoyskiisa “Verulam” markii uu qof u soo dhawaaday, kadibna ka toogtay qadaadka.
“Markii aan nimid, waxaan aragnay dhibanaha Youssef Deedat oo dhinaca wajiga wadada dhinaceeda u yaalo, waxaana qadaadka loogu dhuftay rasaas, waxaana dhaawaciisa loo duuliyey isbitaal u dhow aaga”. sidaasi ayuu ku daray afhayeenka.
Sarkaal ka tirsan dowlada ayaa cadeeyay in kiiska iskudayga dil uu ka furmay magaalada Verulam, ujeedada ka dambaysa weerarka weli ma cada.
Sababta shilka ayaa lagu sheegay aragtida Sheekhu oo khalafsaneyd dhinaca Masiixiyada iyo Hinduuga.
Arintan darteed, qoysku waxay ku yiraahdeen warbixin qoraal ah oo ay siiyeen warbaahinta in Deedat uu weli noolyahay laakiin uu wali kujiro xaalad halis ah, laakiin sida ku xusan waxa lagu tilmaamay mid yara “dagan”.
Bayaanka ayaa intaa ku daray inuu kujiro qaybta daryeelka degdegga ah, iyagoo carabka ku adkeeyay in 24 illaa 48 saacadood ee soo socota ay muhiim u noqon doonaan marka laga soo kabanayo.
Wiilkiisa ayaa wuxuu cadeeyay bayaanka in aabihiis uu kujiro xaalad halis ah isbitaalka, iyo in kasta oo dhaawiciisu culus yahay, “hadana wuxuu helayaa daryeelka caafimaad ee ugu fiican.”
Qoyska ayaa qoraalkooda waxay ku soo gabagabeeyeen iyagoo uga mahadcelinaya bulshada Muslimiinta iyo shacabka taageeradooda, waxayna codsadeen in la ixtiraamo waxyaabaha khaaska ah inta lagu jiro waqtigan murugada badan”.
Waxaa xusid mudan in baraha bulshada ay baahiyeen warar ku saabsan geerida wiilka Deedat saacado gudahood markii la toogtay, laakiin qoyskiisa ayaa xaqiijiyey inaysan sax ahayn.